Dr. Babu Ram Bhattarai – प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७४
प्राप्त मत 31807
डा बाबुराम भट्टरार्इ: Dr. Babu Ram Bhattarai
गोरखा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ मा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टरार्इ विजयी भएका छन् ।
पूर्व सहकर्मी एवं माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ६ हजार ८ सय ७४ मत अन्तरले पछि पार्दै उनले जित पक्का गरेका हुन् ।
६० हजार १ सय १७ मत गणना भएको गोरखा क्षेत्र नम्वर २ मा भट्टराईले ३१ हजार ८ सय ७ मत ल्याएर विजयी भए । भने श्रेष्ठले २४ हजार ९ सय ३३ मत ल्याएर पराजित भए ।
नेपाली राजनीतिमा प्रशंसा र आलोचना दुबै कमाएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई गोरखा २ मा नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका छन् । डा. भट्टराई चुनाव लडिरहेको क्षेत्रमा उनका बलिया प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेकाले गोरखा २ चुनावी चर्चाको शिखरमा छ ।
गोरखामै जन्मेर हुर्केका पूर्वमाओवादी नेता डा. भट्टराईले ०६४ र ०७० का दुईवटा संविधानसभाको चुनावमा गोरखाबाट जित हात पारे । त्यसपछि उनी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बने । संवैधानिक सम्वाद समितिको सभापति भएर संविधान निर्माणमा भूमिका खेले ।
तर, संविधान बनेलगत्तै डा. भट्टराई माओवादी पार्टी परित्याग गरेर नयाँ पार्टी गठनमा लागे । दशरथ रंगशालाबाट घोषणा गरिएको नयाँशक्ति पार्टीमा यसवीचमा केही उतार चढावहरु आएका छन् । कतिपय अभियन्ताहरुले डा. भट्टराईको साथ छाडेका छन् । तैपनि डा. भट्टराई जिल्लाका लोकपि्रय नेता हुन् ।